Dif बिभिन्न दृष्टान्त शैलीहरू जुन तपाईंलाई प्रेरणा दिन्छ क्रिएटिव अनलाइन
Dif बिभिन्न दृष्टान्त शैलीहरू जुन तपाईंलाई प्रेरणा दिन्छ
लुआ लौरो | | प्रेरणा
बारेमा सोँच चित्रण। को लागी तपाईंले कस्तो प्रकारको दृष्टान्त सोच्नुभएको छ? के तपाइँ सँधै समान शैली को लागी आकर्षित हुनुहुन्छ?
तल हामीले different अलग शैलीको साथ illust चित्रकारहरूको चयन संग्रह गर्यौं। तपाइँ तिनीहरूको कार्यहरू गर्ने तरिका, तिनीहरूको र color्ग प्यालेट, उनीहरूका रेखाहरू, उनीहरूका सन्दर्भहरूबाट प्रेरणा पाउनुहुनेछ ... के तपाईंलाई लाग्छ कि हामी तिनीहरूलाई हेर्छौं?
Different बिभिन्न शैलीहरू, different बिभिन्न चित्रकारहरू
Eiko Ojala, कागज चित्रहरू
इको ओजाला इस्टोनियामा बस्ने एक चित्रकार र ग्राफिक डिजाइनर हो। सामान्यतया, ऊ डिजिटल रूपमा काम गर्दछ र हातले सबै चीज गर्दछ। आफ्नो रचनात्मक प्रक्रियामा उनी छायाको अध्ययन गर्न समय बिताउन मन पराउँछन्, र उसको शैली धेरै चिन्न योग्य छ।
डेनिस गोन्चरको डिजिटल चित्रण उहाँ ट्याब्लेटमा उस्तै प्रकारले कार्य गर्नुहुन्छ जुन एक चित्रकारले आफ्नो क्यान्भासमा गर्दछ। फुर्ति स्ट्रोकहरू, धेरै दिशाहरूमा, अपूर्णताहरू टिप्ने पेन्टको विशिष्ट, क्षणिक रेखाहरू जुन यसको कार्य क्षेत्र पार गर्दछ र यसको छापलाई त्रुटिको रूपमा छोड्छ ... डेनिसको दृष्टान्त, म प्रयोग गर्न को लागी एक चित्र को प्रतिनिधित्व अवलोकन गर्दै छु। मैले डिजिटल पेन्टि traditionalलाई परम्परागत पेन्टि toको नजिक ल्याउने डेनिसको प्रयास अविश्वसनीय र धेरै आकर्षक छ।
Stavros Damos द्वारा रेखा चित्र कहिलेकाँही चित्रण। कहिलेकाँही कार्टुनहरू। कहिलेकाँही दुबै बीच मिक्स। अघिल्लो भन्दा फरक शैली र यो हामीले कागजका प्रकाशनहरूमा देख्यौं। छायांकन र र of्गको एक रूप जुन नक्काशीको समयबाट आउँदछ, जहाँ सबै फ्रेमहरू द्वारा गरिएको थियो। कुनै श doubt्का बिना, एउटा शैली जसको यसको आकर्षण छ र जुन आज मनपर्न जारी छ। को Stavros Damos पोर्टफोलियो यसको कुनै फाईदा छैन।
मोर्गन डेभिडसन, रंगीन पेन्सिल दृष्टान्त २१ यो अमेरिकी विद्यार्थी हामीलाई सम्झाउन आउँछ कि रमाईलो चित्रण पनि रंगीन पेन्सिलका साथ पनि बनाउन सकिन्छ। र यदि होईन भने, त्यो मयुर अध्ययनलाई भन्छ कि उसले गर्यो। तपाईं उनको मा अधिक उनको पराक्रम देख्न सक्नुहुन्छ टम्बलर पोर्टफोलियो.
एन्टोनियो सेगुरा डोनाट द्वारा भित्तामा चित्रण
ग्रेट भ्यालेन्सियन भित्तिचित्र एन्टोनियो सेगुरा डोनाट। यो, विशेष गरी, युवा केन्द्रको अनुहारको लागि बनाईएको हो। को प्रवेश गर्ने थिएनन्? डल्कको नामले परिचित, उहाँ आफैंलाई भोक र अतुलनीय अफ-रोड इलस्ट्रेटरको रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ जसले सडक कला, चित्रण र ग्राफिक डिजाइनको क्षेत्रमा सर्छ। उनका प्रमुख स्टाइलिस्टिक प्रभावहरूमध्ये काराभागीओको टेनेब्रिमोस र फ्लेमिशका चित्रहरूमा विस्तारका साथ एक जुनून छ। एन्टोनियोले आफ्नै सपनाहरू र दैनिक घटनाहरूमा आधारित चरित्रहरू र कथाहरू सिर्जना गर्न रमाईलो गर्न दावी गरेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » Dif बिभिन्न दृष्टान्त शैलीहरू जुन तपाईंलाई प्रेरणा दिन्छ
१० डलर भन्दा कमको लागि प्रीमियम गुणस्तर मकअप